“အတွေးစလေးတွေ”: ချစ်သောအညာ ( ၅ ) . . .
Posted by Han Kyi at 4:21:00 am
ဆရာရေးတဲ့ချစ်သောအညာ ဖတ်ပြီးမှ အညာရဲ့ ရိုးသားမှုလေးတွေကိုသေချာတွေ့လိုက်ရတယ်
သင်္ကန်းတောင်း ကျက်တယ်ဆိုလို့ ... တခါတုန်းက ဘိလပ်ရှင်ပြုအလှူပွဲမှာ မောင်ရှင်လောင်းလေးတွေကို သင်္ကန်းတောင်းရပြီလားဆိုတော့ ရပြီ ... တဲ့။ ဘယ်လိုတောင်းမလဲ မေးတော့ "ပေး" တဲ့။ :))
အညာမုန့်ထဲမှာ မုန့်ဆီကြော်တော့ မကြိုက်ဖူး။ မုန့်ပေါင်းတော့ ကြိုက်တယ်။ အညာက အမျိုးတွေ လာရင် မုန့်ပေါင်းဝယ်ဝယ်လာတယ်။ ဖက်ကလေးနဲ့ ထုတ်ထားပြီး စားလို့သိပ်ကောင်းတာပဲ။
ဆရာဟန်ရဲ့ အညာမြေဌာနေဟောင်း လွမ်းချင်းကို ဖတ်ပြီး ကျမလဲ သေချာမရောက်ဖူးတဲ့ အညာကို လွမ်းသွားတယ်။
ဘယ်လိုကြောင့်( မောင့်ပက်လက်လန် )ဖြစ်သတုန်းပေါ့
အိမ်မှာ စက်ချုပ်တဲ့ မမကြီးကို သတိရမိသွားရဲ့
ဆရာရေးထားသလိုပါဘဲ အင်္ကျီအပ်တဲ့သူက နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ပုံကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ဒီလိုပုံချုပ်ပေးပါ ပြောတာကိုးဗျ.....။
အေးဗျာ...အညာဒေသဆိုတာက အညာသားတွေအတွက်တော့ ရေးလို့ ပြောလို့ လွမ်းလို့ မကုန်နိုင်တဲ့အရပ် ချစ်လို့မ၀ နိုင်တဲ့အရပ်ပေါ့ဗျာ။
တော်တော်များများက ခင်ခင်ထူးရေးတဲ. “အညာသူအညာသား ကျမ ဆွေမျိုးများ” ဆိုတဲ. စာအုပ်ထဲကအတိုင်းဘဲနော်။
ဆရာရေ အလုပ်တွေများနေလို့ ဒီနေ့မှပဲ
အညာမြေကို နောက်ပြန်လျှောက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး
ဆရာ့ပို့စ်ဖတ်ပြီး အညာမှာ ခြံဝိုင်းတစ်ဝိုင်းလောက်ဝယ်
အညာသားနဲ့မြေလတ်သားတို့ရဲ့ လုပ်ဟန်လုပ်ကွက်လေးတွေ ထပ်တူညီ နီးပါးပါလား။ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ချစ်သောအညာ ဆောင်းပါးလေးကနေ ဗဟုသုတတွေအတော်ရသွားတယ် စာရေးကောင်းတော့ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတယ်။ တီတင့်ရဲ့ သားနှစ်ယောက်ကို သူတို့အဖေက ပထမဆုံး အကြိမ်ကို ရွာမှာ ရှင်ပြု ရဟန်းခံလုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ ဦးဟန်ကြည်ရေးတာတွေနဲ့ ကွက်တိပဲး)ထမင်းစားရုံကြီးတွေ ဆောက်တဲ့ ကာလသားအဖွဲ့ကို တီတင့်ခင်ပွန်းက အာမီရမ်နဲ့ ဧည့်ခံခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်။တစ်ခါက ရေးဘို့စိတ်ကူးသေးတယ် စာဖတ်သူတွေ အိပ်ငိုက်မှာစိုးလို့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ဟိဟိ
ဆရာဟန် ရေးထားတာဖတ်တော့မှ သင်္ကန်းတောင်း ပြန်ဆိုနေမိတယ်... မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေပြီ။ မုန့်ဆီကြော်ကိုတော့ သိပ်ကြိုက်....
အရေးအသားကလည်းပီပြင်လို့ တကယ်ရောက်နေသလားလို့ ထင်မိတယ်။
ဆရာပိုစ့်လေးဖတ်ပြီ ရွာကိုတောင်လွမ်းသွားတယ် အညာမဟုတ်ပေမဲ့ ရွာစလေ့ပေါ့ ဆရာရယ် တစ်ချို့လည်းမတူဘူးရယ် စောင့်မျှော်လျှက်ပါရှင်..
ခင်ခင်ထူးရဲ့အညာနဲ့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့အညာက မိုင် ၁၀၀ ကျော်လောက်ဝေးပါသတဲ့ Anon ရေ...သို့ပေမင့် အညာဒေသတွေဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး ဓလေ့တွေ စရိုက်တွေကတော့ ကူးလူးဆက်ဆံနေတာကလား...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေ၀င်းမြင့်ကို လေးစားသလောက် ခင်ခင်ထူးကို ဖီလင်မလာတဲ့ ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် အညာသူအညာသားကျွန်မဆွေမျိုးများကို ရေးလက်စ ချစ်သောအညာ ဆီးရီးစ်တွေပြီးရင် ဖတ်ကြည့်ဖို့တော့ ထုံးတို့ထားလိုက်ပါသဗျား...
18 February 2013 at 05:28
ရေးတဲ့စာတွေ အတော်များများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်လို့ ကောင်းသလို ဗဟုသုတလဲ အလွန်ရပါတယ်။ မကြာမကြာလဲ ဖတ်ရင်း ပြုံးမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကို အဓိကဦးတည်နေတာ သိရတဲ့အတွက်လဲ အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဒီပို့စ်ထဲမှာတော့ နဲနဲ လွဲနေတာလေးတွေ ပြောပါရစေ။ လွဲနေတာ ဆိုတာထက် ဒကာတော် ပမာဒလေခဖြစ်ပြီး လျပ်တပြက်ရေးလိုက်မိလို့ လွဲနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ရေးပြီးသားကို ပြန်စစ်ရအောင် အချိန်က မပေးနိုင်ဘူး မဟုတ်လား။
သက္ကလ မဟုတ်ပါဘူး။ သကလ ပါ။ အလုံးစုံသောလို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါတယ်။
သက္ကလဆိုတာ ရှေးခေတ် အိန္ဒိယပြည်ထဲက တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ နာမည်ပါ။
၀တ္တမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ဋ္ဋ (ဋနှစ်လုံးဆင့်)ပါ။ ၀ဋ်ဆင်းရဲလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
၀တ္တဆိုတာ ကျင့်ဝတ်ကို ပြောတာပါ။ မိဘကျင့်ဝတ် ဆရာကျင့်ဝတ် စသဖြင့်ပေါ့။
(သကလ၀ဋ္ဋဒုက္ခနိဿရဏနိဗ္ဗာနဿ သစ္ဆိကရဏတ္ထာယ၊ အလုံးစုံသော သံသရာဝဋဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုပါရစေခြင်းအကျိုးငှာ)။
၀ိသုဒ္ဓာရုံ ရှင့်ကျင့်ဝတ်လို့ ရေးမဲ့အစား ၀ိသုဒ္ဓါရုံ ရှင်ကျင့်ဝတ်လို့ ရေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ခွာလိုက် ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ ကြက်သွန်ခွါလို့ ရေးရမယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာစာပေထဲမှာ ခင် ဂု ငေါ ဒေါ ပုံ ၀၊ ခြောက်လုံး မောက်ချ (-ါ)ချ။ ဆိုပြီး ဆိုရိုးရှိပါတယ်။ စာရေးမယ်ဆိုရင် ရေးချကို ရေးတဲ့အခါ ခ ဂ င ဒ ပ ၀ အက္ခရာတွေကို မောက်ချ(-ါ) ချရေးရမယ်။ ကျန်တဲ့ အက္ခရာတွေကို ၀ိုက်ချ (-ာ) ချရေးရမယ်လို့ ဆိုရိုးစကား ရှိတာ ကြားဖူးပါတယ်။
မောက်ချ (-ါ)နဲ့ ရေးရမဲ့ အက္ခရာတွေကို ၀ိုက်ချ (-ာ)နဲ့ ရေးမိရင် ကျန်တဲ့ စာလုံးအချို့နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ရောထွေးတတ်လို့ပါတဲ့။ ဥပမာ။ ခာ (ဆ)။ ဂာ(က)။ ငာ (ထ)။ ဒာ(အ)။ ပာ (ဟ)။ ၀ာ (တ)။
ဒါကြောင့် အဲဒီစာလုံးတွေကို မောက်ချ (-ါ)နဲ့ ရေးရပါမယ်တဲ့။ ဥပမာ။ ခါ ဂါ ငါ ဒေါ ပါ ၀ါ။
မိချောင်းမင်း ရေးခင်းပြသလို ဖြစ်မှာလဲ စိုးရိမ်မိသေးတယ်။ အမှန်ဆို ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လဲ အမှားပေါင်း ထောင်သောင်းပါဘဲ။
ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်မြတ်က ပထမသံဂါယနာခေတ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တတိယသံဂါယနာခေတ်ရောက်မှ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ပထမသံဂါယနာနဲ့ တတိယသံဂါယနာက နှစ်ပေါင်း ၂၃၅ နှစ်တိတိ ကွာပါတယ်။ ပြီးတော့ သံဂါယနာတင်ပွဲမပျက်အောင် ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်က ကာကွယ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသောကမင်းကြီးရဲ့ ရေတွင်း ရေကန် ကျောင်း စေတီပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်စီကို ရေစက်ချပွဲမှာ အဲဒီပွဲကို မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ အဲဒီ ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်အကြောင်း ဦးဇင်းတို့ ထေရ၀ါဒစာပေမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆတစ်ခုလို့ ပညာရှင်တွေ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေး ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ခ် http://www.lknt11.com/2009/01/blog-post_22.html ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တော်တော်များများတော့ ရေးလိုက်မိပြီ။ ဒကာတော်က တပည့်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ ဆရာမို့လို့ အခုလို ရေးလိုက်တာပါ။ ဦးဇင်းတို့လောကမှာ ရယ်စရာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ပြောရိုးတစ်ခု ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ငရဲပြည်မှာ ဓမ္မကထိကဘုန်းကြီးတွေ တရားသူကြီးတွေ အများကြီးဘဲတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တရားအမှားဟောမိပြီဆိုရင် တရားနာ ပရိသတ်တွေက အများကြီးမဟုတ်လား။ အားလုံးကို အယူမှားအောင် လုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာကိုး။ နောက်ပြီးတော့ တရားသူကြီးဆိုတာကလဲ အမှုကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမှားဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် အပြစ်အရမ်းကြီးတယ် မဟုတ်လား။ အခု ဒကာတော်ကလဲ ကျောင်းဆရာဆိုတော့။
မဟုတ်မှလွဲရော။ တော်ကြာ ငရဲပြည်မှာ ဦးဇင်းတို့ ဓမ္မကထိကအုပ်စုတွေရယ် တရားသူကြီးအုပ်စုတွေရယ် ဒကာတော်တို့ရဲ့ ကျောင်းဆရာဆရာမ အုပ်စုတွေရယ် သွားဆုံကြရင် မကောင်းပေဘူး မဟုတ်လား။း)))
ကဲ ဒကာတော်ရေ.. ဦးဇင်းမှားရင်လဲ ပြင်ပေးပါ။ လူသားတိုင်း အမှားမကင်းနိုင်ကြဘူး မဟုတ်လား။ တစ်ယောက်မှားရင် တစ်ယောက်ကပြင်ပေး၊ တစ်ယောက် လွဲနေရင် တစ်ယောက်က တည့်မတ်ပေးနဲ့ အတူတူ ချီတက်ကြတာပေါ့။
ဒကာတော်.. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပြီး လောကကောင်းကျိုး များများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။
ဆရာဟန်တို့ကတော့ အညာတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်.. အဲလေ.. ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ဖွင့်ဟနေပါပေါ့လား။ တစ်ခါထဲနဲ့ အညာအကြောင်း အပြည့်အစုံသိခွင့်ရတာကိုက သူကြီးမင်းတို့ ကံကောင်းလှပြီ။ ဒေသကွဲတော့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ ကွဲလွဲနေတာလေးကိုက တစ်မျိုး ချစ်ချင်စရာလေး။
ဒါနဲ့.. ဟို မောင့်ပက်လက်လှန်ဆိုတာလေး သဘောကျပါ့။
အင်း ဆရာဟန်လဲ ဒီတစ်ခါတော့ အပိုင်း ၅ တောင် ရောက်လာပြီကော။ ပထမ သူကြီးသားပေါက်ကြီး လိုများ တစ်နေမလားလို့ စိုးတထိတ်ထိတ်ရယ်။ ချစ်သောအညာကတော့ အဆုံးအထိ အခုလို ဖီလင်လေးနဲ့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် သွားမယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ပေါက်ကြီးသားကိုလဲ မမေ့နဲ့ဦးနော် ဆရာ။ အဲဒါလေးလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာပါ။ ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာဠုရဲ့... သည့်ထက်တောင် ပိုသေးဘုရား။း)
ဆရာဟန်ရေးတဲ့ ချစ်သောအညာကို ဖတ်ပြီး အရမ်းသဘောကျပါတယ် နောက်အပိုင်းလေးတွေလဲ မျှော်နေပါတယ်.. Ashin Janaka ရဲ့ ကွန်မန့်ကြောင့်လဲ ဗဟုသုတတွေများကြီး ရသွားပါတယ်ရှင်...
အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးတာကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပထမဦးစွာ လျှောက်ပါရစေ...အကိုးအကားနဲ့တကွ ကျကျနန ထောက်ပြပေးတဲ့ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ စေတနာကိုလည်း အတိုင်းအဆမရှိ လေးစားဦးတင်မိပါတယ်...
“ သကလ ၀ဋ္ဋ ”ကို အလွဲကြီးလွဲသွားတာ တပည့်တော်ရဲ့ နမော်နမဲ့နိုင်မှုပါဘုရား...မှားမယ်လို့ ထင်ပေမယ့် သေချာအောင် ပြန်မကြည့်မိတဲ့ အပြစ်လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ...နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ အကိုးအကားကို သေချာကျနအောင် ကြည့်ရှုရှာဖွေပြီးမှ ရေးတော့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်...
၀ိသုဒ္ဓာရုံ ကတော့မူရင်း စာအုပ်မှာ မောက်ချ (ါ) နဲ့ ရေးထားပေမယ့် ဘ၀င်မကျတာကြောင့် ပြောင်းလိုက်တာပါ...ကြက်သွန်ခွာ မှာလည်း သည်အတိုင်းပါပဲဘုရား... မြန်မာစာဖွဲ့ထုံးအရ “ ခ၊ဂ၊င၊ဒ၊ပ၊၀ ” စတဲ့ စာလုံးတွေကို မောက်ချ ( ၀ိုက်ချ ) နဲ့ ရေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတာ မှန်ပါတယ်ဘုရား...သို့ပေမင့် လုံးထပ်ရေးရာမှာတော့ မှားယွင်းပြီး ဖတ်မိစရာ အကြောင်းမရှိတဲ့အတွက် ရေးချ (ာ) နဲ့ပဲ ရေးထုံး ရှိပါတယ်...အနှာကြောင့် ကြက်သွန်ခွာဆိုတဲ့ စာလုံးပေါင်းကို “ ခွါ ” လို့မပေါင်း တော့တာပါ...
မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းကို အောက်မှာ ညွှန်းလိုက်ပါတယ် အရှင်ဘုရား...
ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း တပည့်တော် ပြန်ဖတ်လိုက်ပါပြီဘုရား...သီရိဓမ္မာ သောကမင်းကြီးကို ဘုရားခေတ်နဲ့ ရောထွေးသွားတဲ့ တပည့်တော်ရဲ့အမှားကိုလည်း မြင်မိပါတယ်...သာသနာရေးကိစ္စမှာ မလျော်မကန်ဖြစ်သွားတာကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်...
ဓမ္မကထိကရယ်...တရားသူကြီးရယ်...ကျောင်းဆရာရယ် အနှီသုံးမျိုးမှာ တပည့်တော်တို့က ငရဲကို အရင်များ သွားကြရမလား မသိပေါင်ဘုရား...ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စိတ်အလိုမကျတာတွေ...ဒေါသတွေနဲ့ နေ့ရှိသရွေ့ နပမ်းလုံးနေရတာကိုးဘုရာ့...
အခုလို ကျကျနန ထောက်ပြဆွေးနွေးပေးတဲ့ ဘုန်းဘုန်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...နောက်နောင်မှာ အများတွေရှိရင်လည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ထောက်ပြဆွေးနွေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ...
ဘုန်းဘုန်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ...
19 February 2013 at 01:49
အကိုရေ... ချစ်သော အညာကို အပိုင်းအလိုက် ဖတ်မိတော့ ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ သုံးလွန်းတင် စာအုပ်ကို သတိရသွားတယ်၊ အကိုလည်း အပိုင်းတွေနဲ့ဆိုတော့ စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆို ထုတ်လို့ရနေပြီ...နော်အကို :)
အခုလို ထပ်ဆင့်ကွန်မင့်ပြန်ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်လဲ အကျိုးရှိပါတယ်။ အမှတ်မထင်မှားခဲ့တဲ့ အမှားလေးတွေကို ထောက်ပြပေးတာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာ လက်ခံပေးတဲ့အတွက်လဲ အထူးလေးစားမိပါတယ်။
၀ိုက်ချ မောက်ချ ကိစ္စအတွက် ဒကာတော်ရှင်းပြပေးတာကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒကာတော်ပြောမှဘဲ လုံးထပ်ရေးတဲ့ အခါမှာ မောက်ချ ချရေးတဲ့ အလေ့အထကို ပြန်အမှတ်ရစေတယ်။ အခုလို အချင်းချင်း အသိဖလှယ်ရတာ အလွန်အကျိုးများပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒကာတော် ဘယ်လိုမှတော့ မထင်ပါနဲ့။ ဒကာတော် ရေးထားတဲ့...
အနှီဓလေ့က ပထမသင်္ဂါယနာတင်တဲ့ အချိန်ကို ပြန်သတိရမိအောင် လုပ်နေသလို။
ဆိုတဲ့ ၀ါကျကလေး အခုထက်ထိ ရှိနေသေးလေရဲ့။ အဲဒီဝါကျအစား အသောကမင်းကြီးရဲ့ ပွဲတော်ကို ညွန်းဆိုတဲ့ ၀ါကျဆို ပိုများ သင့်လျော်လေမလားလို့။
ဒကာတော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ဒီဝိုက်ချ မောက်ချ အကြောင်းလေးကိုဘဲ ပို့စ်တစ်ခု တင်ဖြစ်လိုက်တယ်။ အားလပ်ရင် လာရောက်ဖတ်ရှုပြီး ပြင်ဆင် ထည့်သွင်း နှုတ်ပယ်ရမဲ့ အကြောင်းအရာလေးများတွေ့ရင် အသိပေးပြင်ပေးပါဦးလုိ့ တောင်ဆိုပါတယ်။
ဒကာတော် ကျန်းမာပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ။
အချိန်လုပြီး ကောန်မင့်တ်ကို အခုလို ထပ်ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀ိုက်ချ မောက်ချ ကိစ္စကိုလဲ ဒကာတော် အသိပေးမှဘဲ လုံးထပ်တွေမှာ မောက်ချအစား ၀ိုက်ချကိုသာ သုံးလေ့ရှိတာကို အမှတ်ပြုမိတော့တယ်။ အခုလို အချင်းချင်း ဖလှယ်ရတာ အတော်လေး အကျိုးများပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးဇင်း ပို့စ်တစ်ပုဒ် တင်လိုက်ပါတယ်။ အမှတ်တရ အနေနဲ့ပေါ့။ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေလဲ ဖတ်ရတာပေါ့။ အခြားအကြောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ိုက်ချနဲ့ မောက်ချအကြောင်းပါဘဲ။ ဒကာတော် အားလပ်ရင်တော့ ထပ်ဖြည့်စွက်စရာရှိတာကို အကြံလာပေးဦးပေါ့။ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့... စိတ်တော့ မရှိပါနဲ့။
အနှီဓလေ့က ပထမသင်္ဂါယနာတင်တဲ့ အချိန်ကို ပြန်သတိရမိအောင် လုပ်နေသလို။
ဆိုတဲ့ ၀ါကျလေးက ဒီအတိုင်း ကျန်ရစ်နေလေသေးရဲ့။ အဲဒီဝါကျအစား အသောကမင်းကြီးရဲ့ အလှူပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်မဲ့ ၀ါကျကလေးသာ ဆိုရင် ပိုပြီးများ လျော်ကန်လေမလားလို့။
ဗဟုသုတစာပေတွေ များများ ရေးနိုင်ပါစေ။